S/land Oo Ganafka Ku Dhufatay Wax Lagu Sheegay Isbahaysiga Gacanka Sheegtayna Inaanay Cidna u Daba Fadhiisanayn Xuduudkeeda Bada | Marsa News
S/land Oo Ganafka Ku Dhufatay Wax Lagu Sheegay Isbahaysiga Gacanka Sheegtayna Inaanay Cidna u Daba Fadhiisanayn Xuduudkeeda Bada
January 7, 2020 - Written by editor marsan
Hargeisa:(Marsanews) Wasaarada arimaha dibada ee jamuuriyada somaliland ayaa War-saxaafadeed ka soo saartay isbahaysiga Badda Cas ee shalay lagaga dhawaaqay dalka Boqortooyada Sucuudiga.
Kulan uu qabtay Boqor Salman oo ay ka soo qaybgaleen wadamada xuduuda la leh Badda Cas ayaan Somaliland lagu soo marti qaadin.
Warsaxafadeedka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Somaliland oo ku qornaa luuqada af ingiriisiga ayaa u dhignaa sidan
Jamhuuriyadda Somaliland waxay ku celcelineysaa mowqifkeedii hore ee ahaa inay waxba ka soo qaadayn oo ayna iskaashi la yeelan siyaasadaha, barnaamijyada iyo howlaha wadamada xubnaha ka ah carabta / Afrika ee xaduudka la leh Badda Cas, inta ay ka maqan tahay lana dafirsanyahay kaalinta muhiimka ah ee ay kaga jirto daneeyayaasha. Somaliland waa dal madaxbanaan umana ergeysan doonto xuduudkeeda badda wadan kale.
Somaliland waxay garowsan tahay muhiimadda istiraatiijiyadeed ee Badda Cas ee loogu talagalay nabadda iyo nabadgelyada gobolka iyada oo ugu horreyntiina soo dhoweyneysa baahida loo qabo in la sameeyo madal loo wada dhan yahay si loo ilaaliyo badda. Somaliland waxay muddo dheer ku dadaaleysay ilaalinta 850 KM ee xuduudkeeda badda uu ahaado mid nabada oo ka caagan budhcad-badeed iyo argagaxiso oo dhan.
Waxaanu aaminsanahay in dhowrista amniga Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed ay khusayso dhammaan waddamada la wadaaga xuduudaha baddan, waxaanu soo dhawaynaynaa wixii xal u ah danaha guud.
Si kastaba ha noqotee, Somaliland ma aqoonsan doonto isbahaysi aan sharci ahayn oo takoora daneeyayaasha sharciga ah.
Somaliland waxay rajaynaysaa in ay ka qaybqaadato iskaashi kasta oo wax ka qabanaya nabadgelyada iyo barwaaqada deegaankan, iyada oo aan lagu xadgudbin madax-bannaanida dal kasta. Somaliland waxay u aragtaa nabaddeeda, xasilloonideeda iyo horumarkeedu inay si buuxda ugu xidhan tahay gobolka guud ahaan, Waxaanu sii wadaynaa in aanu kala shaqayno daneeyayaasha arrimo iyo dadaalo walba ee wax ku ool u ah danta inaga dhaxaysa ee lagu gaadhayo si wada jir ah oo loo siman yahay.